Maxay ka dhigan tahay in Virgil van Dijk uu ku guuleysto laacibka BISHA ee Premier League!???? – Gool FM
Maxay ka dhigan tahay in Virgil van Dijk uu ku guuleysto laacibka BISHA ee Premier League!????
(England) 12 Jan 2019. Daafaca Liverpool Virgil van Dijk ayaa ku guuleystay abaal marinta laacibka Bisha December ee Premier League.
Daafaca reer Holland ayaa bishii la soo dhaafay 7-kulan u saftay Reds isagoo kabtan xirnaa saddex ka mid ah kulamadaasi oo ay dhammaan wada adkaadeen.
Haddaba midaan ayaa ka dhigan in van Dijk uu noqday daaficii ugu horreeyay ee ku guuleystay abaal marinta Laacibka bisha ee Premier League tan iyo sanadkii 2013.
Bishii December Van Dijk ayaa ka soo muuqday ciyaartii ay Liverpool goolka caatada ah uga adkatay Everton, sidoo kale kulankii 4-0 ay uga adkaadeen Manchester United iyo ciyaartii ay ku bahdileen Arsenal oo ay kaga adkaadeen 5-1.
Yeelkeede, Van Dijk waxba kama qaban karin inuu joojiyo kooxda xafidaneysa Premier League ee Manchester City kuwaa oo kooxdiisa biday guul daradii ugu horreysay horyaala ee xagaagan bilowgii bishan Janaayo.
Ma ahan in daafaca reer Holland oo kaliya uu abaal marin helay bishii la soo dhaafay ee waxaa sidoo kale macalinka bisha loo caleemo saaray tababarihiisa Jurgen Klopp.
BAL EEG: Rikoodhka gooldhalineed ee cajiibka ah uu Lionel Messi ku leeyahay kooxda Eibar, kahor kulanka habeen dambe
SAWIRRO: Lambarkee loo xiray Cesc Faregas